Degmo xeebeedka Cadale oo gacanta u gashay dowladda Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Milateriga Soomaaliya iyo kuwa nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta degmada Cadale iyo deegaanno kale oo hoostaga oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe, sida uu sheegay taliyaha guudtada 12-aad ee Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Maxamuud Maxamed Xasan “Qaafoow”.
Qaafow oo hogaaminaya howlgalka ciidamada Soomaaliya iyo AMISOM ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ay la wareegeen degmada Cadale, halkaasi oo uu tilmaamay iminka ka wadaan howlgallo amni xaqiijin ah.
Jeneraal Maxamuud Maxamed Xasan “Qaafoow” ayaa tilmaamay in ciidamada ay la kulmeen soo dhaweyn ay u sameeyeen shacabka halkaasi ku nool, waxaana uu intaa ku daray inay sii wadayaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, isla markaana gacanta dowladda dib loogu soo celinayo deegaannada xeebta ku teedsan ee ay Shabaabku maamulayeen.
Ciidamada huwanta ah ayaa shalay la wareegay deegaanka Raage Ceelle, halkaasoo saaka ay ka dhaqaaqeen, kadibna ay gaareen degmada Cadale oo saran xeebta badweynta Hindiya.
Degmada Cadale ayaa dhanka Woqooyi bari kaga began Muqdishio, waxeyna u jirtaa ilaa 220 KM, halka ay Jowhar u jito ilaa 130 KM.
Al-Shabaab ayaa hada ku sugan kaliya labo degmo oo ka tirsan Shabeelaha Dhexe oo kala ah Ruunir-good iyo Aadan Yabaal oo ah saldhigooda ugu weyn.
Labadan degmo ma saarna xeebta, waxaana Aadan Yabaal xigtaa dhanka xadka gobolku la leeyahay Hiiraan, halka Ruunirgood xigto xadka gobolka la yeehay Galgaduud.